Muxuu Daley Blind ka yiri in Aabihii Danny Blind laga ceyriyay xilka tababaranimo ee xulka Holland?? – Gool FM
(Netherlands) 27 Mar 2017. Xulka Holland ayaa xilka tababaranimo ka xayuubiyay macallinkooda Danny Blind kaa oo dhalay daafaca kooxda Man United ee Daley Blind.
Blind ayaa xilkan hayay oo kaliya 20 bilood iyo 18 kulan waana laga qaaday iminka kaddib guul daradii ka soo gaartay xulka Bulgaria isreeb-reebka koobka adduunka.
Daley Blind ayaa ku soo hadlay boggiisa Instagram isagoona muujiyay fal celintiisa ku aadan in xilka xulka laga xayuubiyay aabihii.
“Inaan heerk sare ka wada shaqeyno sida aabe iyo wiilkiisa waa riyo rumowday. Marna kama aadan tagin masuuliyadaada mana aadan is dhiibin, waan kugu faanayaa aabe.”. Blind ayaa sidaa ku soo qoray boggiisa Instagram.
Hatem Ben Arfa oo furka ku tuurtay tababare Unai Emery kadib keydkii uu galiyay